Ilmanimada hore laga bilaabo dhalashada ilaa bilowga xanaanada ilmaha yar yar waa wakhti muhiim ah oo waxbarashadooda iyo koritaankoodaba uu aad u sareeyo. Baadhitaanka caafimaadka dhalaanka waa baadhitaan deg deg ah oo fudud oo lagu ogaanaayo koritaanka iyo caafimaadka caruurta ay da'doodu u dhexeeyso saddex ilaa afar sano. Waxay tilmaamaysaa, marxalad hore, suuragalka waxbarashada ama haduu jiro walaac badan oo xaga caafimaadka ah si caruurta ay u helaan caawimaadyada ay u baahanyihiin ka hor inta aysan bilaabin Iskuulka. Baadhitaanka caafimaadka dhalaanka wuxuu taageerayaa u diyaargarowga fasalka xanaanda barbaarinta caruurta yar yar iyo caafimaad iyo natiijada koritaanka ilmaha. Baadhitaanka caafimaadka dhalaanka ma aha imtixaanka galitaanka fasalka barbaarinta caruurta yar yar ee (Kindergarten).
Si aad ugu qabato ballanta baaritaanka carruurnimada hore ee ilmamahaaga HALKAN RIIX si aad uga diiwaan galiso khatka onlinka kala xiriir waaxda Waxbarashada Early Childhood lambarka ah: 320-370-8250. Baaritaanka dhalaanka yar yar wuxuu ka dhacayaa:
Quarryview Education Center, 800 S. Seventh St., Waite Park, MN . Wixii su’aala ah ku dir cinwaankan hoos ku xusan: earlychildhood@isd742.org.